မောင်စေတနာ: Smart PC
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် နားအေးပါးအေး ရှိလှသည့် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သော စနေနေ့တွင် အေးဆေး ငြိမ်သက် စွာဖြင့် အနားယူနေလေ၏။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေကြီး ကိုရဲမြင့် ရောက်ရှိလို့ လာလေ၏။
ဗျို့ . . . ကိုစေတနာ . . . လူပျင်းစည်းစိမ်ကို ခံစားနေပါလား . .
ဟုတ်ပါ့ . . . ကိုရဲမြင့်ရာ . . . ။ ဒါနဲ့ ဘာကိစ္စတုန်း။ အေးဆေးပဲ မဟုတ်လား . . .
အေးတော့ အေးပါရဲ့ဗျာ . . . နို့ပေမယ့် ကြုံတုန်းတော့ တစ်ခုတော့ မေးချင်သား . . .
မေးပါ . . . မေးပါ . . .
အိမ်က ကွန်ပျူတာက တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုများ လေးလာသလို့ဗျာ . . . . error တွေကလည်း ပြလိုက်တာမှ ဖတ်လို့တောင် မရဘူး ။ ဆေးကောင်းလေးရှိရင် ညွှန်းပါအုံးဗျာ ဟု၍ မေးလေ၏။
ကျွန်ုပ်လည်း နောက်ချင်သည် စိတ်ဖြင့် ရယ်မော၍သာ နေလေ၏။ ကိုရဲမြင့်တစ်ယောက် စိတ်မရှည်သလို အမူအရာဖြင့် ကြည့်နေလေရာ
စိတ်တော့ ထိန်းပါ ကိုယ့်လူ . . . ပြောပြဆို ပြောပြရမှာပေါ့
ဒီဆော့ဝဲလ်လေး သုံးကြည့်ရင် စက်ကို ပေါ့စေပြီး error တွေလည်း တော်တော် ရှင်းပေးနိုင်ပါရဲ့။ အကျိုးအာနိသင် အနေနဲ့ကတော့
၁) Fix Registry Problem
၂) Fix invalid shortcuts
၃) Clean up your tracks . .. . etc . .
သုံးကြည့်လိုက်ရင် စက်လည်း မြန်လာနိုင်သလို error တွေလည်း ရှင်းလင်းပေးနိုင်တယ်။ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါရဲ့ ကိုယ့်လူ . . .ဟု ရှင်းပြလိုက်လေ၏။
ကိုစေတနာ ကောင်းတယ်ဆိုရင် ယုံမှားမရှိပါဘူး . . . ဆော့ဝဲလ်အမည်နဲ့ ဆော့ဝဲလ်သာ ပေးပါတော့ ဟု တောင်းလေ၏။ ဆော့ဝဲလ်အမည်က Smart PC ဖြစ်ပြီး ဆော့ဝဲလ်ကိုတော့ ဒီမှာသာ ယူသွားပေတော့ဗျာ။
ဒီအတိုင်းကြီးတော့ မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ Install လုပ်ပုံလေးတော့ မစပါအုံး ဟု မေးလေ၏။ ဒါက မခက်ပါဘူး . . . Smart PC နဲ့ Key ဖိုင် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Smart PC ကို Install လုပ်ပြီးရင် မဖွင့်ပဲ ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ Key ဖိုင်ကို Run ။ Yes လုပ် ။ Ok ဆိုရင် Full Version ဖြစ်ပြီးသုံးလို့ရပါပြီ ဟု ဖြေကြားလေ၏။
ကောင်းပါ့ . . . ဒါဆိုရင် ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက်တော့ ချီးမြှင့်ချင်လို့ ခြေတော် ကြွနိုင်ပါရဲ့လား ကိုစေတနာ . . ဟု မေးလေရာ ကျွန်ုပ်လည်း မဆိုင်းမတွပင် ထိုင်ခုံမှ ဖင်ကြွလို့ နေပြီး အကောင်းဆုံးပေါ့ ကိုယ့်လူရာ ဟု ပြောကြားရင်း Tea Shop သို့ ထွက်ခွာခဲ့တော့လေ၏။
3:59 PM, September 14, 2011
မယုံ ပါဘူး ကိုစေ ရာ ..... ကော်ဖီတစ်ခွက်တော့ ဟုတ်မထင်ပေါင် ...
ဟိုဟာ လေးများ ဖြစ်နေမလား ဗျာ စာသံကိုက ဖတ်ရတာ ဟိုအသံနဲ့ဗျ ...
7:49 PM, September 14, 2011
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အစ်ကို။ ဒေါင်းသွားတယ်
အစ်ကိုရဲ့သင်ပြမှုကြောင့် ကျနော် computer အကြောင်း နဲနဲသိလာပါတယ်။
down သွားပါတယ် အစ်ကို။ window7အတွက်
virtual drive pro လေးများရနိုင်ရင် ကူညီပေးပါခင်ဗျာ
10:40 AM, October 08, 2011
အစ်ကိုရေ...ဒီမှာ clickhere နဲ့ စာရင်းတွေကို တင်ပြချင်လို့ ပါဗျာ....အဲဒါ အစ်ကို အဆင်ပြေရင် အမြန်လေးရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။
7:59 AM, January 11, 2012